အဆိုပါ PC ကို WINDOWS7ကိုဘို့ PS3 EMULATOR - WINDOWS ကို - 2019
Windows7ကိုဘို့ Play Station3emulator
ယနေ့စမတ်ဖုန်းအများအပြားပိုင်ရှင်တွေ Instagram ကိုတစ်ဦးမှတ်ပုံတင်အကောင့်ရှိပါတယ်။ အဆိုပါအရာသည်ဤဓာတ်ပုံများကို၏ထုတ်ဝေရည်ရွယ်လူကြိုက်အများဆုံး social networking site ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေ့ကွဲပြားခြားနားသောအခြေအနေများအဘို့အစာမကျြနှာပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်၏တစ်ဦးပိုမိုနီးကပ်စွာကြည့်ယူပါ။
အကောင့်ပြန်လည်နာလန်ထူ - နာမည်ကျော်လူမှုရေးဝန်ဆောင်မှုများအပေါ်တစ်ဦးပရိုဖိုင်းကိုမှဝင်ရောက်ခွင့်ကို restore လုပ်ဖို့ဖျော်ဖြေလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ။ ဒါဟာလုပ်ထုံးလုပ်နည်း access ကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရသည့်အတွက်ထုံးစံပေါ် မူတည်. အမျိုးမျိုးကွဲပြားလိမ့်မည်။
Option ကို 1: တစ်ဦးကိုဆိုင်းငံ့ပရိုဖိုင်းကို Restore
အကောင့်မိမိနှင့်အတူသော့ခတ်ထားပြီးလျှင်ပင်ထိုကွောငျ့လူမြားစှာ Instagram ကိုကွဲပြားခြားနားသောမတည်ငြိမ်မှု၏သုံးစွဲသူများနှင့်, ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုပြောင်းလဲနိုင်သည်ကပိတ်ပင်တားဆီးမှုဖယ်ရှားပစ်ရန်လိုအပ်သောဖြစ်နိုင်သည်။ ကံကောင်းထောက်မစွာ, ဒီလုပ်ဖို့လွယ်ကူပါတယ်။
စာမကျြနှာကို restore လုပ်ဖို့သင်ရုံ Instagram ကို app နှင့်သင့်အကောင့်တစ်ခုခွင့်ပြုချက်ကို run ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
ကိုလည်းကြည့်ပါ: Instagram ကိုရဖို့ကိုဘယ်လို
အလားတူပဲ, ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကွန်ပျူတာပေါ်တွင်ဖျော်ဖြေကြလိမ့်မည်။ username နှင့် password ကို - သင် Instagram ကို၏စာမကျြနှာကို web version ကိုသွားပါနှင့်၎င်းတို့၏အထောက်အထားများရိုက်ထည့်မှသာလိုအပ်ပါတယ်။ ဤအ data ကိုမှန်ကန်များမှာပြီးတာနဲ့စာမျက်နှာမှဝင်ရောက်ခွင့်ပြန်လည်စတင်လိမ့်မည်။
Option ကို 2: Remote ကိုယ်ရေးဖိုင် Recovery ကို
အဆိုပါသတင်းဆိုး: သင်ပရိုဖိုင်းကိုသော့ခတ်ရန်လိုအပ်ကြောင်းမခံစားရဘူး, သင်၏စာမျက်နှာအောင်မြင်မည်မဟုတ်စေပြီးတော့ဒီမှာကဖယ်ရှားပစ်ရန်မဟုတ်ပါလျှင် - ကလုံးဝဖယ်ရှားပြီးခဲ့, ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့သမျှသောဓာတ်ပုံများနှင့်အတူ။ တစ်ခုတည်းသောဖြေရှင်းချက် - အသစ်တစ်ခုကိုမှတ်ပုံတင်။
ကိုလည်းကြည့်ပါ: Instagram ကိုအတူမှတ်ပုံတင်ရန်လုပ်နည်း
option 3: သင့်ရဲ့ login နဲ့ password ကိုမေ့လျော့ထားပြီးဖြစ်သောပရိုဖိုင်းကို, Restore
ကြောင်းကိစ္စတွင်ခုနှစ်, ငါသည်သင်တို့၏အသုံးပြုသူအမည်သို့မဟုတ်စကားဝှက်ကိုပြန်လည်နာလန်ထူအီးမေးလ်လိပ်စာသို့မဟုတ်သင်မှတ်ပုံတင်စဉ်ကပေးဖုန်းနံပါတ်ကိုအသုံးပြုပြီးလုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်သတိရကြဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့သင့်ရဲ့ page ကိုမလာနိုင်မယ်ဆိုရင်။
စမတ်ဖုန်း access ကို Restore
လျှောက်လွှာ Instagram ကို run လိုက်ပါ။ ရဲ့ login ပြတင်းပေါက်မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။ အောက်တွင်, သင် button ကို click ရန်လိုအပ်မည် "ဟုအဆိုပါ input ကိုအတူကိုကူညီပါ".
အသုံးပြုသူအမည်, အီးမေးလိပ်စာသို့မဟုတ်မိုဘိုင်းဖုန်းနံပါတ်ကို: သင်ဒေတာအမျိုးအစားများများထဲမှသတ်မှတ်ဖို့လိုအပ်ရွေးချယ်မှုအောက်ပါ။
သတ်မှတ်ထားသောအရင်းအမြစ်စာမျက်နှာမှဝင်ရောက်ခွင့်များအတွက်လင့်ခ်ကိုစလှေတျပါလိမ့်မည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမှုကဒီက e-mail ကိုခုနှစ်တွင်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာတစ်ဦးလတ်ဆတ်တဲ့စာတစ်စောင်ကိုရပါလိမ့်မယ်ရှိရာစာတိုက်ပုံးသို့ကြည့်ရှုဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
အဆိုပါစာသငျသညျနှစ်ကြိမ်စကားဝှက်အသစ်ရိုက်ထည့်ဖို့သတိပေးခံရပါလိမ့်မည်သည့်မှတဆင့်အကူးအပြောင်းပြီးနောက် link တစ်ခုဆံ့မည်ဖြစ်သည်။ Instagram ကိုအတွက်အသစ်အခွင့်ပြုချက်အောက်ရှိပြီးသားစကားဝှက်အသစ်ညွှန်ပြရန်မေ့လျော့ကြပါဘူး။
သငျသညျသူမ၏စာမျက်နှာနှင့်သင့်ကွန်ပျူတာပေါ်တွင် access ကိုရဖို့ရန်လိုအပ်လျှင်, ဒီဖနျဝဘ်ဗားရှင်း၏အကူအညီမှဖွင့်သည်။
Instagram ကိုဝန်ဆောင်မှုစာမျက်နှာပေါ်တွင်မဆို browser ကိုသွားပါ။ စကားဝှက်ကို input ကို box ကိုခလုတ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "ပျောက်ဆုံးသွားသော".
Instagram ကိုအဆိုပါဖျော်ဖြေခဲ့သည့်အရင်းအမြစ်နှင့်အကောင့်မှတ်ပုံတင်သတ်မှတ်ရန်သင့်အားလိုအပ်သည်။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, ပူးတွဲပါက e-mail လိပ်စာ။ အောက်ပါလိုင်းသေချာပေါက်သငျသညျတကယျ့ပုဂ်ဂိုလျဖြစ်ကြောင်းအတည်ပြုပေးရန်ပုံရိပ်ကနေဒေတာတွေကိုမှတ်ပုံတင်ရန်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ခလုတ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "Password ကို Reset".
ကျွန်တော်တို့ရဲ့က e-mail ကိုမက်ဆေ့ခ်ျကိုပို့ခဲ့ပါတယ်။ ဒါဟာ link တစ်ခု, တစ်တွေနောက်ဆုံးနှုတ်ဆက်ခြင်းမှပြန်လည်စတင်စကားဝှက်ကိုလုပ်ဆောင်ရာ၏အကူးအပြောင်းများပါရှိသည်, သင်မူကားလည်းနှစ်ကြိမ်သစ်တစ်ခု၏အပြီးသတ်ပေးရန်လိုအပ်ပါသည်။
Option ကို 4: ခိုးယူကိုယ်ရေးဖိုင် Recover
မကြာသေးမီကလူကြိုက်များ profile များကိုပိုင်ရှင်များစာမျက်နှာ "ကိုခိုးယူ" သူ fraudsters များ၏တိုက်ခိုက်မှုမှသည်ခံရ၏။ ရလဒ်အဖြစ်သငျသညျအများအားဖြင့်တစ်ဦးတည်းယခင်နည်းလမ်းထဲမှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းတိုက်ခိုက်စကားဝှက်ကိုမသာပြောင်းလဲနေတဲ့အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်, access ကို restore, ဒါပေမယ့်လည်းသတင်းအချက်အလက် (အီးမေးလ်လိပ်စာ, ချည်ထားသောဖုန်းနံပါတ်) ကိုဆက်သွယ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။
ဟုတ်ပါတယ်, မည်သည့်ကိစ္စတွင်အတွက် fraudsters ပေးဆောင်မဖြစ်သင့် - ပင်မစာမျက်နှာဖို့အတွက်ပြန်သွားဖို့ကြိုးစားသင့်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ဒီနည်းလမ်းကိုသင်ယခင်ကတစ်ဦးပရိုဖိုင်းကို Instagram ကို Facebook အကောင့်မှချည်ထားသောသောအခြေအနေပေါ်တွင်သာအလုပ်လုပ်ပါတယ်။
လျှောက်လွှာ Instagram ကို run လိုက်ပါ။ ယင်းပရိုဖိုင်းထဲမှာရဲ့ login page တွင်ဖို့ scroll "ရဲ့ login နှင့်အတူကိုကူညီပါ".
သင့်ရဲ့ user name ကိုရိုက်ထည့်ပါ, ပြီးတော့ခလုတ်ကို tapnite "Next ကို".
သင်သည်သင်၏ account ကိုဝင်ရောက်ဖို့အတော်ကြာရွေးချယ်စရာကမ်းလှမ်းခဲ့သည်လိမ့်မည်: သုံးပြီး e-mail, လိပ်စာများ, ဆဲလ်ဖုန်းနံပါတ်နှင့် Facebook account ကို။ ပထမဦးဆုံးနှစ်ဦးကိုမှတ် fraudsters အားဖြင့်ပြောင်းလဲခဲ့ကြလျှင်, သင် Facebook ကိုသုံးပြီးသင့်ရဲ့အကောင့်ကို recover လုပ်ဖို့ကြိုးစားနိုင်ပါ။ button ကို Select လုပ်ပါ "Facebook မှာအတူ Login".
မျက်နှာပြင်ကို Facebook ဖို့ခွင့်ပြုချက်ဝင်းဒိုးကိုပြသပါလိမ့်မယ်။ သငျသညျမှန်ကန်သောအထောက်အထားများရိုက်ထည့်ပြီးတာနဲ့မျက်နှာပြင်လောဘ Instagram ကိုပရိုဖိုင်းကိုပြပေးလိမ့်မယ်။ သင်ရုံစာမျက်နှာကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးမှဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရန်ရှိသည် -, မိုဘိုင်းဖုန်းနံပါတ်ကိုသင့်စကားဝှက်, အီးမေးလ်လိပ်စာကိုပြောင်းလဲ။ Two-factor authentication ကိုသက်ဝင်ရန်သေချာစေပါ - ဤနောက်ထပ်ကြိုးစားမှု hacking ကနေပရိုဖိုင်းကိုကယ်တင်မည်။
လျှောက်လွှာမှာအသုံးပြုသူရဲ့ပရိုဖိုင်းကိုရန်ရဲ့ login page တွင်, ခလုတ်ကိုကို select "Facebook မှာအတူ Login"။ မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိအတညျပွုပြတင်းပေါက်။
သငျသညျကိုနောက်တခဏအတွက်, လက်ျာသတင်းအချက်အလက်သတ်မှတ်ထားသောခဲ့လျှင်, မျက်နှာပြင် Instagram ကို၏ကိုယ်ရေးအကျဉ်းကိုပြပေးလိမ့်မယ်။ အခုတော့မီနူးသွားပါရန်သေချာစေပါ "Edit Profile" နှင့်အဟောင်းအီးမေးလ်လိပ်စာကိုပြန်သွားပါ။ စကားဝှက်ကိုပြောင်းလဲရန်နှင့် Two-factor authentication ကို enable ဖို့သေချာပါကအောက်ပါ။
Option ကို 5: ဖြည့်ညှင်းပိတ်ဆို့နေတဲ့ပရိုဖိုင်းကို Restoring Instagram ကို
Instagram ကိုလုံလုံလောက်လောက်တင်းကျပ်ဖြည့်ညှင်းဖြစ်ခြင်း၌တည်၏။ ဒီကွန်နက်ရှင်မဟုတ်ဘဲအဘယ်သူ၏စာမျက်နှာများကိုကြိုတင်ပိတ်ဆို့ထားသည်, ဒါကြောင့်အကောင့်သို့ထုတ်ဝေနှင့်ရည်ညွှန်းစာမကျြနှာမြား၏လိုအပ်ချက်များကိုယူအလွန်အရေးကြီးသည်အသုံးပြုသူအရေအတွက်ဖြစ်မှာတော့အရာ၏အသေးစိတ်ကိုဒီ link မှာဖတ်ပါနိုင်ပါတယ်။
ကဖြစ်ပျက်ခဲ့သကဲ့သို့သင်တို့ထုတ်ဝေ posted လျှင်, သင်၏စာမျက်နှာပေါ်တွင်ကန့်သတ်ရှိစေခြင်းငှါ, Instagram ကို၏လိုအပ်ချက်များကိုကျေနပ်အောင်မထားဘူး, ထိုသို့အခြားအသုံးပြုသူများအနေဖြင့်တိုင်ကြားချက်ကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ အဲဒီအကြောင်းလေ့လာပါ, သင်အီးမေးလ်တစ်စောင်အတွက်လက်လှမ်း၏ပြန်လည်စတင်ပိတ်ဆို့ခြင်း၏အကြောင်းရင်းများနှင့်နည်းလမ်းများအကြောင်းကိုသင့်အားအကြောင်းကြားနိုင်ပါတယ်။
ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, သငျသညျကိုသာလျှောက်လွှာဖွင့်လှစ်ရန်နှင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ထို့ပြင်မျက်နှာပြင်စာမျက်နှာမှဝင်ရောက်ခွင့်ပြန်လည်ဖို့ဘယ်လိုညွှန်ကြားချက်ဖော်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။